Nhau - Usandibvunze kuti chii chinonzi POF kupisa chinodzikira firimu, ndikuudze pazasi?
POF yekupisa-inodzikira firimu inosangana nekushandiswa kweinovhurwa yekumhara midziyo ine akasiyana maumbirwo. Iyi isina-chepfu, isina kunhuwirira, isina mafuta, uye inoenderana nehutsanana-chikafu inoitisa vagadziri kushandisa mavara anobata maziso kuti vawane dhizaini ye360 °. Ipa kutamba kuzere mukugadzira uye fungidziro, kuitira kuti zvinwiwa nezvimwe zvinhu zvinyatso kujeka mukushandisa kwemazita, simbisa mufananidzo pasherefu, uye gadzira isingatarisirwi yemidziyo. Mune POF kupisa inodzikira indasitiri yemufirimu, kambani inotanga kutanga mumugove wepamusika wechipiri uye wechipiri mugove wepasi rose wemusika.
POF kupisa inodzikira zvigadzirwa zvemufirimu zvinogona kukamurwa muzvikamu zvitatu: POF yakajairwa firimu, POF muchinjikwa-wakasangana firimu, uye POF yakakwira-yekuita firimu zvinoenderana chaiko kushandiswa uye maitiro. Parizvino, mari yekutengesa yekambani uye purofiti yakazara yemhando idzi nhatu dzezvinhu inogadzira zvinopfuura 95% Pamusoro ndiyo sosi huru yemubhadharo wekambani uye purofiti. Muna 2016Q1, nekuda kwezvinhu zvakaita sekuderera kwezvinhu zvakasvibirira, chigadzirwa chekambani chakakomba purofiti margin yakawedzera. Muchikamu chekutanga, yakawana purofiti yemakumi maviri nemazana maviri nemakumi maviri nemazana matanhatu nemazana matanhatu emamiriyoni euan anokonzerwa nemubereki, kuwedzera kwegore-pagore kwe268.15%.
1) Pe-kupisa-inodzikira firimu inowanzo shandiswa mune yese gungano kurongedza kwewaini, magaba, maminera emvura, zvakasiyana zvinwiwa, machira uye zvimwe zvigadzirwa. Chigadzirwa chine mukana wakanaka wekuchinja, kusagadzikana, kusagadzikana nemisodzi, uye hazvisi nyore kutyora. , Kwete kutya mafungu, hombe shrinkage chiyero;
Nyore kusimudza uye kushanda. Kuomarara kwepamusoro, kukwiza kwakadzika, kunogona kushandiswa kurongedza otomatiki emhando yepamusoro-yekumhanyisa mitsara. Iyo PVC yekugadzirisa maitiro ichaburitsa zvinhu zvisina kugadzikana, izvo zviri nyore kukonzera kukuvara kwechimakanika, uye zviri nyore kunamatira kune yekuisa chisimbiso tsvimbo, izvo zvisingaite kushanda uye kunonetsa kuchengetedza. 5. Kuchengetedza Mushure mePOF kudzikira kuputira, makona mana echisimbiso akapfava, haazocheke maoko evanhu, uye anopikisa kukwizwa. Mushure me PE kudzikira kuputira, makona mana echisimbiso akapfava uye haazodimbure maoko emunhu. Mushure mePvv shrink kurongedza, makona mana echisimbiso akaomarara uye akapinza, nyore Kucheka uye kubuda ropa. 6. Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye hutsanana POF haina-chepfu, haina kuburitsa hwema hwehuturu panguva yekugadzirisa, uye inosangana neUS FDA neUSDA zviyero. PE haina chepfu, haigadzi gasi rine chepfu panguva yekugadzirisa, uye inosangana neUS FDA uye USDA zviyero. PVC ine chepfu, uye kugadzirwa kuchaburitsa hwema uye huturu gasi, uye zvinorambidzwa zvishoma nezvishoma.
OPS inodzora firimu (inotungamirwa polystyrene) kupisa inodzora firimu irudzi rutsva rwekupakata zvinhu neOPS kupisa inodzikira firimu inosangana nezvinodzivirira nharaunda. OPS kupisa inodzikira firimu ine yakakwira simba, yakakwira kuomarara, yakagadzikana chimiro, uye yakanaka gloss uye pachena. Kugadziriswa kuri nyore, kupenda kuri nyore, kuita kwakanaka kwekudhinda, uye yakanyanya kudhinda resolution. Kune ezviratidzo izvo zvinogara zvichitsvakisisa kudhinda kwakanaka, iko iko iko iko kuvandudzwa kwezvinhu. Nekuda kwekukwirisa uye kusimba kweOPS firimu, inogona kukodzera padhuze nemidziyo yemhando dzakasiyana, saka haigone chete kudhinda mapatani akajeka,
Polyolefin Pof Shrink Firimu, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Shrink Firimu Pvc, Polyolefin Pof Shrink Kuputira,